Xasan Sheekh oo maanta isdiiwaan-galiyay | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home BOGGA HORE Xasan Sheekh oo maanta isdiiwaan-galiyay
Xasan Sheekh oo maanta isdiiwaan-galiyay
Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ah Musharax u taagan qabashada xilka Madaxweynaha ayaa isdiiwaan geliyay, kadib markii uu la kulmay Guddiga Doorashada Madaxweynaha.
Madaxweynaha oo ay wehliyaan xubno ka tirsan Dowladda Federaalka ayaa waxa ay tageen xarunta Villa Hargeysa oo ah halka ay ka soocto isdiiwaan gelinta Musharaxiinta u tartameysa xilka Madaxweynaha Soomaaliya, isagoona maanta ansixiyay in uu yahay Musharax Madaxweyne, maadaama uu gacanta ku dhigay warqada cadeyneysa in la diiwaan geliyay.
Xasan Sheekh Maxamuud Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya ayaa noqonaya Musharaxii 12-aad ee isdiiwaan geliya maadaama horey ay isku diiwaan geliyeen 11 Musharax.
Guddiga Doorashada Madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxaa ay sheegayaan in isdiwaan gelinta Musharaxiinta ay u socoto si wanaagsan, islamarkaana ay ku rajo weyn yihiin in lagu soo gaba gabeeyo waqtigii loogu tala galay.
Maalinta berri ah oo Axad ayaa la soo gaba gabeynaa diiwaan gelinta Musharaxiinta Madaxweynaha, si loo guda galo howlaha kale ee Doorashada.
Previous articleGuddiga Doorashooyinka oo la kulmay ururada siyaasadda
Next articleAkhriso: magacyada musharixiinta Madaxwaynaha ilaa iyo hadda isdiiwaan-galiyay